Waxaa Magaalada Muqdisho lagu Qabtey Shirkii ugu Horeeyay ay Yeeshaan Maamulka Gudiga Paralympic Soomaaliya, | Somali Disability Empowerment Network - SODEN
Waxaa Magaalada Muqdisho lagu Qabtey Shirkii ugu Horeeyay ay Yeeshaan Maamulka Gudiga Paralympic Soomaaliya,
Waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtey shirkii ugu horeeyay ay yeeshaan maamulka Gudiga Paralympic Soomaaliya, shirkaas oo gudoominayay Gudoomiyaha Paralympics Soomaaliya mudane Axmed Cabaas ayna goob joog ka ahaayeen gudiga iyo maamulka cusub ee Paralympic Soomaaliya, waxaana ku wehliyay shirkaan Xoghayaha guud ee GOS mudane Duraan Faarax.
Waxayna ka wada hadleen waxyaabo badan oo horyaala iyo sidii shaqada loo dardar gelin lahaa, kulankaana wuxuu ahaa midkii ugu horeeyay oo noociisa oo kale lagu qabto Soomaaliya oo looga dhiso maamul ka shaqeeya horumarinta iyo ka qayb galka dadka naafada ah isboortiga, sida ay iisheegana dadkii shirkaasi soo agaasimey wuxuu ku soo dhamaadey guul iyo farxad.
Mudane Maxamed Cali Faarax oo ah nin firfircoon oo tayo leh kana mid ah maamulkaan cusub ayaa iisheegay inuu aad ugu faraxsan yahey in maanta uu ka qayb galo shirkii ugu horeeyay ee lagu dhisaayay gudigii Paralympic, islamarkaana uu rajeynaayo in laga gaaro himilooyinka laga leeyahey, Maxamed waa nin ka shaqeeya horumarinta iyo raadinta xuquuqda dadka naafada ah, kuna nool magaalada Muqdisho, masuulna ka ah urur ka shaqeeya wadanka.
Docda kale Paralympic Soomaaliya waxaa looga fadhiyaa inay qabtaan shaqo muhiim ah oo loo qaban doono dadka naafada ah ee Soomaaliyeed meel kasto ay ka joogaan, si ay uga qayb galaan isboortiga noocyadiisa kale duwan.
Shaqada hortaala ma ahan mid kaligood ay qaban karaan, madaama aysan jirin maamul isboorti iyo ciyaaro ay ka qayb galaan dadka naafada ah ee ku nool wadankii, balse waxaa loo baahan yahey in dadka Soomaaliyeed ay garab istagaan kuna caawiyaan sidii looga miro dhalin lahaa.
Maanta dadka naafada Soomaaliya ku nool aad ayay u badan yihiin markii loo eego 25 sano ka hor, waxayna ku sugan yihiin xaalad adag oo loo baahan yahey in mujtacama ay kaalintooda uga muuqan laheyd, si fursadaha caalamka ka jira looga faa’ideeyo waxaa muhiim ah in gacan la siiyo, lana taageero, xataa dhiirigalinta Allah ka dhigee.
Waa in la dhisaa xiriiro tayo leh oo maamul aqoon leh ay hogaamiyaan, kuwaasoo soo diyaariya macalimiin iyo ciyaartooy tayo leh oo ka qayb gala cayaaraha isboortiga ay dheelaan dadka naafada ah, si wadankeena uga matalaan fagaaraha caalamka.
Qofkii daneynaayo ama yaqaan ciyaaryahano ka mid noqon kara xiriirada noocyadiisa kale duwan ee hoostagi doono Paralympics waxaa uu la xiriiri karaa maamulka cusub ee uu hogaamiyo ciyaaryahan hore Axmed Cabaas oo ah Gudoomiyaha cusub ee Paralympics Soomaaliya.
Waxaana u rajeynayaa guul iyo horumar, waana u hambalyeynayaa insha Allah wixii taageero ahna